China kwụ gbawara n'etiti ọkụ na-alụ ọgụ mgbapụta factory na-emepụta | Liancheng
SLO (W) Series Split ugboro abụọ mmiri mgbapụta na-mepụtara n'okpuru nkwonkwo mgbalị nke ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na-eme nnyocha nke Liancheng na na ndabere nke ẹkenam German elu teknụzụ. Site ule, ihe niile arụmọrụ index dị iche iche na-edu ndú n'etiti ndị mba ọzọ yiri ngwaahịa.
Nke a usoro mgbapụta bụ nke ihe kwụ na gbawara n'etiti ụdị, na ma mgbapụta casing na cover gbawaa Central akara nke na aro, ma mmiri mmiri na tinyekwa na mgbapụta casing nkedo integrally, a wearable mgbanaka set na n'etiti handwheel na mgbapụta casing, na impeller axially ofu n'elu-agbanwe itunanya mgbanaka na n'ibu akara ozugbo n'elu aro, na-enweghị a muff, ukwuu ẹsụhọde ọrụ nrụzi. The aro ka nke igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ ndị 40Cr, na mbukota oru Ọdịdị atọrọ a muff iji gbochie aro si kara nká, bụ biarin bụ ihe na-emeghe bọl amị na a cylindrical ala amị, na axially ofu n'elu a itunanya mgbanaka, e nweghị anụnụ na nut na okporo otu-ogbo abụọ-mmiri mgbapụta otú ahụ na-akpali akpali direction nke mgbapụta ga-agbanwe na uche na-enweghị mkpa dochie ya na impeller ka ọla kọpa.
ụlọ ọrụ ọkụ na-alụ ọgụ usoro
Nke a usoro mgbapụta ime na ụkpụrụ nke GB6245
Previous: kwụ multi-ogbo ọkụ na-alụ ọgụ mgbapụta
Next: otu-ogbo ọkụ na-alụ ọgụ mgbapụta
multistage ọkụ na-alụ ọgụ mgbapụta otu
drainage mgbapụta, Vertical Inline Pump, Double Suction Split Case Pump, Drainage Pumping Machine,